प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरुलाई पहिलो ‘डेट' मा ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुराहरुSamachar Pati
प्रेमको परिभाषा व्यापक छ । प्रेम मानव जीवनमा नभइ नहुने कुरा पनि हो । उमेर पुगेका युवायुवती बीचमा प्रेमसम्बन्ध हुनुलाई ठूलो कुरा पनि मानिँदैन । पहिलो डेट नै खल्लो भयो भने तपाईंको प्रेम सम्बन्धमा तित्तता आउन सक्छ । वा आपसी मतभेद पैदा हुनसक्छ ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरुलाई ‘डेट’ बस्ने समय र स्थानको धेरै पिरलो हुने गर्छ । धेरैलाई समस्या हुन्छ, डेटिङ कहाँ जाने ? कति बेला जाने ? सबैले ‘डेट’ बस्दा सबैले सुरक्षित स्थानजको खोजी गर्छन् । डेट जाने प्रेमी र प्रेमीकाले कस्तो कपडा लगाउने भन्ने पनि बहश चल्ने गर्छ । अनि डेटिङमा कसरी पेश हुने, के भन्ने, के कुरा गर्ने ?
पहिलो भेटेमै ‘के तपाईं अरु कसैसँग पनि डेट गरिरहनुभएको छ ? भन्ने जिज्ञाषा राख्ने हुँदैन । यदि तपाईं गम्भिर प्रेमसम्बन्ध चाहनुहुन्छ भने निश्चित रुपमा पहिलो डेटमा यस्तो प्रश्न सोध्नुहुँदैन । अहिले तपार्इंहरु एकअर्काको लागि अपरिचित हुनुहुन्छ ।
पहिलो डेटमा एक अर्काको बारेमा ससाना कुरा थाहा पाउने, मनपर्ने कुरा थाहा पाउने तथा उनी कस्तो स्वभावको छन् थाहा पाउने चासो हुनु स्वभाविकै हो तर, पहिलो डेटमै हदभन्दा धेरै पर्सलन भएको उनीहरुलाई मन नपर्न सक्छ ।
यदि पहिलो डेटमा नै तपाईंले जसलाई खोजिरहनुभएको थियो त्यो व्यक्ति यहि हो वा उ नै आफ्नो सपनाको राजकुमार हो भने पनि उसको तर्फबाट कस्तो जवाफ वा प्रतिक्रिया आउँछ त्यो बुझ्नुहोस् ।
के उसको सपनाको राजकुमारी पनि तपाईं नै हो त ? यसबारेमा जानेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् र केहि पटकको भेटपछि मात्रै उसले तपाईंलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन भनेर सोध्नुहोस् । पहिलो डेटमै उसको बारेमा राम्रो धारणा बनाएर लालमोहर लगाउनु गलत हो । केहि समय पर्खिनुहोस् र केहि अरु पनि डेट गर्नुहोस् । पर्खाइको पनि आफ्नै मज्जा हुन्छ ।
वास्तवमा डेटिङमा तपाईंले के गर्ने, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले डेटिङको लागि त्यतिखेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस जतिखेर तपाईंलाई के सहि र के गलतको भन्ने निर्णय गर्ने परिपक्वता आउँछ ।
एक व्यक्तिले कति कमाउँछन् भन्ने कुरा धेरै व्यक्तिगत र संवेदनशिल मुद्दा हो । जसरी युवतीलाई उनीहरुको उमेरको बारेमा सोधिदैन त्यसरी नै कुनै युवकलाई उसको कमाईको बारेमा प्रश्न गर्नु ठिक होइन् । पहिलो डेटमा त झनै यस्तो प्रश्न भुलेर पनि नसोध्नुहोस् ।
केही युवाहरु यो प्रश्नको जवाफ कुल भएर दिन्छन । तर, धेरै युवाहरु कति कमाउँछन् भन्ने प्रश्नलाई लिएर गम्भिर हुन्छन् । यो प्रश्नले उनीहरुको इगोलाई ठेस पुर्याउन सक्छ ।
जिन्दगीमा गम्भिर हुन र सम्बन्धलाई गम्भिरतापूर्वक निभाउनु जरुरी हुन्छ । तपाईंले आफ्नो पुरा जिन्दगी सँगै बिताउन एक विशेष मानिसको खोजी गर्नु गलत होइन । तर, तपाईंले पहिलो डेटमै यो उ सम्बन्ध प्रति धेरै गम्भिर छ कि छैन भने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो गलत हुन्छ । उसलाई विस्तारै बुझ्नुभयो भने यो प्रश्न सोध्ने जरुरी नै हुँदैन ।
तपाईंको सिधा प्रश्नको उत्तरमा उसले पनि सिधै छैन भन्यो भने के होला ? के तपाई त्यतिखेरै उठेर हिँड्नुहुन्छ ? वास्तवमा विवाह जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय हो । पहिलो डेटमै कसैले पनि यसबारेमा सोचेका हुँदैनन । यदि तपाईंलाई युवक मन पर्यो र आफ्नो लागि पर्र्फेट छ भन्ने लाग्यो भने कुरा अर्कै हो । होइन भने ४र५ डेट त दुवैले एकअर्कासँग भविष्यमा सजिलैसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बुझ्न मात्रै जान्छ ।
करियर ओरियन्टेड युवतीहरु विवाहको कल्पना गर्नासाथ बच्चाको बारेमा योजना बनाउँछन् तर, पहिलो डेटमै बच्चाको बारेमा कुरा गरेमा उसलाई त्यसै पल तपाईंलाई छोडेर भागौं जस्तो लाग्न सक्छ ।
पहिलो डेटमा हल्काफुल्का फ्लर्ट, रोमान्टिक कुरागर्ने आँखाका इशारामा बोल्ने आशा लिएर युवक युवतीसँग भेट्न आउँछ तर, तपाईं बच्चाको कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ भने यस्तोमा उसलाई असजिलो महसुस हुन सक्छ । बरु जिन्दगीको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, फिल्म, फेसन, मौसम करियरको कुरा गर्नुहोस् तर बच्चाको टपिक भने छुँदै नछुनुहोस् ।
तपाई आधुनिक बोल्ड युवती हुनुहुन्छ जसको लागि लभ, सेक्स कुनै वर्जित कुरा होइन र युवक पनि आधुनिक नै छ भने पनि पहिलो डेटमै यति धेरै अन्तरंग प्रश्न सोध्नु हुँदैन ।
अझै तपाईंहरु एकअर्का बीचमा यति धेरै नजिक हुनुभएको छैन कि अर्काको नितान्त निजी पलको बारेमा थाहा पाउने हक राख्नुहुन्छ । यसै पनि यौनको बारेमा कुरा गर्नु धेरै निजी विषय हो । सोच्नुहोस्, यदि उसले तपाईंलाई यहि प्रश्न गरेमा के होला ?
उसले तपाईसँग फेरि भेट्न चाहन्छ भने निश्चिन्त हुनुहोस उ आँफैले कल गरेर फेरि भेट्न बोलाउँछ । तपाईंले बेचैन भएर उतिखेरै त्यसबारेमा सोध्न पर्दैन ।
यसको सट्टा पहिले आफ्नै मनलाई त्यस युवकको साथ अर्कोपटक पनि डेटमा जान चाहनुहुन्छ कि हुँदैन सोध्नुहोस् । यदि तपाईंको मनले चाहन्छु भनेमा पनि पहिलो डेट कस्तो भयो त्यो समिक्षा गर्नुहोस् ।
गलत प्रकार को सुत्ने शैलीले गर्दा अनुहारको सौन्दर्य प्रभाव पर्छ!! कसरी ? जन्नुहोस
तपाईको स्वभाव कस्तो छ त बुढी औलाले बताउछ ? हेर्नुहोस् शास्त्रले यसो भन्छ